माधवकुमार नेपालसहित ११ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको निर्णय !! | सुदुरपश्चिम खबर
माधवकुमार नेपालसहित ११ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको निर्णय !!
उनका अनुसार बैठकले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रीत गर्ने निर्णय गरेको छ भने भ्याक्सिन आयातमा केन्द्रीत हुन सकरारको ध्यानकर्णण गराएको छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
यस्ता समस्याहरु बाट छुटकारा पाउन खानुहोस् दही !!
इमान इज्जत प्रतिष्ठा मति सब सकियो : धर्मानन्द भट्ट